Su’aalahan HIFU FAQ waxay daboolayaan su’aalo badan oo caam ah oo ku saabsan wajigeena wajiga aan qalliinka ahayn.
HIFU FAQ HIFU FAQ Tani waxay dabooshaa su'aalo badan oo caam ah oo ku saabsan wajigeena wajiga aan qalliinka ahayn. Sidee u shaqaysaa? HIFU waxay u taagan tahay Ultrasound Focused Ultrasound, kaas oo lagu sii daayo maqaarka qaab loox yar. Alwaaxyadan ayaa isugu soo ururaya maqaarka hoostiisa qoto dheer oo kala duwan waxayna abuuraan il go '...
Waa maxay Daaweynta leysarka Jaban ee Kaarboon Dioxide CO2?
Waa maxay Daaweynta leysarka Jaban ee Kaarboon Dioxide CO2? Iftiinka nidaamka leysarka CO2 wuxuu si aad ah waxtar ugu leeyahay soo nooleynta maqaarka micro-ablative. Caadi ahaan, beerka laser-ka ee loo yaqaan 'CO2 laser beam' waxaa lagu dhejiyaa kumanaan ulood oo yar yar oo iftiinka ah ah qayb laser ah. Kuwani dogob micro iftiinka garaacay th ...
Immisa daaweyn ayaa loo baahan yahay? Waxaa jira arrimo badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan da'da sawirka, goobta, cabbirka, iyo nooca khad / midabbada la isticmaalay, ee go'aaminaya wadarta tirada daaweynta ee looga baahan yahay ka-saarista oo dhammaystiran (eeg qoraalkaan barta ah si aad wax dheeraad ah uga ogaato). Inta badan dhaqameedka 'tattoo remova' ...
Maxaa dhacaya inta lagaa saarayo timaha leysarka?
Daaweynta ka hor, aagga la daaweynayo waa la nadiifin doonaa. Bukaanjiifka qaar waxaa lasiiyaa jeermis suuxin ah. Kabuubinta aagga lagu daaweynayo waxay caawineysaa goorta aag yar la daaweyn doono oo maqaarku aad u nugul yahay. Waxay qaadataa qiyaastii 30 illaa 60 daqiiqadood in jel-kabuubyo ay shaqeyso. Daaweynta laser-ka ayaa qaadan doonta maqaarka ...
Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Diode Timo Goynta Laser Guriga, 3 Gudaha 1 Ipl, Opt Shr Ipl Timaha Jooji, Module Laser 808, Ipl Xenon Flash Siraaj, Laser Epilator Ipl, Dhammaan Alaabooyinka Qolka 308, No.12, Jingsheng South 2nd Wadada, Degmada Tongzhou, Beijing, Shiinaha